Wasiir ka tirsan xukuumada Britain oo booqasho ku tagey Muqdisho (Sawiro +Cod) – SBC
Wasiir ka tirsan xukuumada Britain oo booqasho ku tagey Muqdisho (Sawiro +Cod)
Xoghayaha gargaarka caalamiga ah ee dawlada Britain Andrew Mitchell & wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tagey magaalada Muqdisho ee caasimada ah, halkaasi oo uu kulamo kula yeeshay madaxda dawlada KMG oo uu ugu horeeyo Ra’isalwasaaraha Dr. Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas).
Andrew Mitchell ayaa noqonaya masuulkii ugu darajada sareeyey ee ka mid ah dawlada Britain oo booqasho ku taga Magaalada Muqdisho in ka badan 18 sano waxaana kulankii uu la qaatey Ra’isalwasaare Gaas ay ku soo qaadeen xaaladaha abaaraha ee ka taagan Soomaaliya.
linkga hoose ka dhageyso shirkii jaraa’id ee wasiirka & Ra’isalwasaaraha
Shir jaraa’id oo ay wadajir ugu qabteen xarunta madaxtooyada isaga iyo Ra’isalwasaaraha ayey ku xuseen sida beesha caalamka looga baahan yahay wax kaqabashada xaalada abaareed ee ka taagan Soomaaliya.
Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya Dr. C/wali Maxamed Cali ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo booqdo Xoghayaha Horumarinta Caalamiga Andrew Mitchell, isagoo sheegay in dhibaatada macluusha Soomaaliya ay tahay mid meel halis ah mareysa.
Dr. C/wali ayaa sheegay in 3.5 (Sadex milyan & shan boqol oo kun) ruux ay xaalado bani’aadanimo iyo macluul ku heyso Soomaaliya, isagoo ugu baaqay Beesha Caalamka inay gar gaar la soo gaaraan dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Ra’isalwasaaraha ayaa sheegay in dawlada Britian aanay ku ekeyn oo kaliya ka qayb qaadashada arimaha gargaarka dadka abaaruhu saameeyeen, balse ay door muhiim ah ka ciyaarayso arimaha siyaasada gaar ahaan sidii Soomaaliya ugu soo laaban laheyd masraxa aduunka.
“Waxaan soo aragnay dhibaatada macluusha ba’an ee ka jirta Soomaaliya, waxaan arkeynaa inay jirto daacuun caloolaha, gaar ahaan 400-kun caruur ayaa xilligan macluul daran ay ku heysataa Soomaaliya”ayuu yiri Andrew Mitchell
Andrew Mitchell ayaa sheegay in doorka gurmadka Beesha Caalamka uu yahay sidii loo baajin lahaa caruurta le’aneysa, waxaana uu sheegay in Britain ay safka hore kaga jirto bulshada Caalamka ee ka hortageysa dhibaatada macluusha, sidii ay uga qeybq aadan lahaayeen.
Xoghayaha gargaarka caalamiga ah ee dawlada Britain Andrew Mitchell mar uu ka hadlayey qaab dhismeedka dawlada KMG ayuu wuxuu xusey in uu helay fursad ay isku arkaan isaga iyo Ra’isalwasaaraha Soomaaliya, waxaa uu tilmaamay in sideed ka tirsan Golaha Wasiirada oo dhowaan ka soo laabtay Qurbaha inuu la kulmo, waxaa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in DKMG ay xalisay khilaafaadkeeda, isla markaana diyaar u tahay inay la dagaalanto musuq maasuqa.
Andrew Mitchell ayaa sheegay in Dowladda KMG looga baahan yahay inay muddo sanad ku qabato doorashooyinka, waxaa uu xusay in loo baahan yahay in laga faa’ideysto ka bixitaanka Al-Shabaab ee Magaalada Muqdisho, isla markaana Dowladda ay gudbiso gar gaarka sama falka.
Xoghayaha gargaarka caalamiga ah ee dawlada Britain Andrew Mitchell & wafdigiisii ayaa isla maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho, iyagoo u kicitimay magaalada Nairobi ee caasimada Kenya oo ay markii hore ka soo ambabaxeen.
Wafdigan UK ka socda ayaa ka mid ah wafuud kala duwan oo ilaa heer Madaxweyne ah oo maalmihii ugu dambeeyey ku soo qulqulayey magaalada Muqdisho, kuwaasi oo doonaya inay indhahooda ku soo arkaan xaaladaha amaan & bini’aadamtinimo ee ka jira Soomaaliya.